सेयर बजारले विस्तारै तय गर्दैछ गति : कुन समूहमा देखियो बढी आकर्षण ? – OnlinePahar
सेयर बजारले विस्तारै तय गर्दैछ गति : कुन समूहमा देखियो बढी आकर्षण ?
२८ माघ २०७७, बुधबार १६:२९ Basanta Khanal	0 Comments	share market
काठमाडौं : सेयर बजार बुधबार औसत अवस्थामा देखिएको छ । सूचक तुलनात्मक रुपमा सुस्त हुँदा कारोबार भोलुम भने औसतमा रहेको हो । नेप्सेले नयाँ उचाई बनाउन प्रयत्न गर्दैछ । यसबीचमा केही बिक्रेता हावी हुनु वा समग्रमा सानो करेक्सन आउनुलाई विश्लेषकहरु स्वभाविक भएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । नयाँ वर्ष प्रारम्भसँगै बजारको गति तेज हुने विश्लेषणहरु पनि भइरहेका छन् । त्यसो त सेयर बजारको गति र प्रवृत्ति सधैं एकनाशको हुँदैन । तलमाथि गर्दै समग्रमा अघि बढ्ने हो । मंगलबार अल टाइम हाइ रेकर्ड बनाएको नेप्से बुधबार थोरै सुस्त देखिए पनि फेरि यसको गति भने नरोकिने धेरैको अपेक्षा छ । किन भने यतिबेला वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थपिने मात्रा बढेको छ । ब्याजदर सस्तो छ । वैशाख लागेपछि सूचीकृत कम्पनीहरुको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण आउन थाल्नेछ । औसतमा नाफा वृद्धिको रिपोर्ट आउने अनुमानहरु भइरहेका छन् ।
वैशाख लागेसँगै विकास निर्माणका कामले थप गति लिने छ । सरकारी खातामा भएको पैसा बजारमा आउन थाल्नेछ । यसले तरलता थप सहज पार्नेछ । यसको सकारात्मक प्रभाव बजारमा पर्नेछ । सेयर बजारको सिजन पनि आउँदैछ । यी समग्र परिदृश्यहरुका आधारमा बजारको दीर्घकालीन गति सकारात्मक र बुलिस नै हुने धेरैको विश्लेषण रहेको छ । यसर्थ, लगानीकर्ताले सबल वित्तीय सूचक भएका कम्पनीहरु छानेर योजनाबद्ध हिसाबले अघि बढ्न जरुरी हुन्छ । माइक्रोफाइनान्स, विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन लगायतका समूहमा तेजी देखिएको छ । नेप्से सूचक २.८५ अंकले तल झरेर २६७१.६२ विन्दुमा अडिएको छ । २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँसहित निफ्रा सबैभन्दा अघि छ । यस्तै, दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः चिलिमे हाइड्रोपावर छिमेक लघुवित्त परेका छन् ।
१३ मध्ये ६ वटा समूहको सूचकमा वृद्धि भएको छ । ७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ । १ करोड ६५ लाख ९३ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको हो । ५ कम्पनीको भाउ सर्किट लाग्ने गरी वृद्धि भएको छ ।
← आज चन्द्रागिरि हिल्सको शेयर खरीद चाप उच्च हुँदा मूल्यमा उच्च वृद्धि
पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज मिति २०७७ चैत २६ गते बिहिवारको राशिफल पढौं →
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय (निर्णयसहित)
२८ माघ २०७७, बुधबार १६:५१ Basanta Khanal	0
बैंकहरूले सेयर किनेको कती समय पछि मात्रै बेच्न पाउने ? (हेर्नुहोस्)
२८ माघ २०७७, बुधबार १०:०८ Basanta Khanal	0
विशाल बजारको सेयर बेच्न चाहनेको भीड किन लाग्यो ?
२८ माघ २०७७, बुधबार १५:३० Basanta Khanal	0